बैंकिङ मुभमेन्ट – Page7– Banking Khabar
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकको सीइओमा रमेशराज अर्याल नियुक्त भएका छन् । २०७२ पुस १४ गतेदेखि बैंकमा कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत अर्याललाई बैंकको व्यवस्थापन समितिले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी अर्याललाई सिइओमा नियुक्त गरेको हो । …
कसमस डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ हृदय राज घिमिरेको कार्यकाल थप गरिएको छ । बैंकको सञ्चालिक समितिको बैठकले उनको कार्यकाल चार वर्षका लागि थप गरेको हो । उक्तm निर्णय आइतबारदेखि लागू भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा …
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा. मीनवहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैँकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई बिहिबारको मन्त्री परिषद् वैठकले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । साढे ४ वर्ष राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा कार्यकारी निर्देशक, त्यसपछि राष्ट्र बैंकको …
हालै झिमरुक विकास बैंकलाई आफुसंग गाभेको ज्योति विकास बैंकको अध्यक्षमा ध्रुव कोइराला नियुक्त भएका छन् । बैंकको बोर्ड बैठकले कोइरालालाई बैंकका अध्यक्षका रुपमा चयन गरेको हो । सो बैठकले बैंकको निर्देशकहरु पनि नियुक्त गरेको छ । नियुक्त हुने निर्देशकहरुमा हरि …
भारतीय केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)’को नयाँ गभर्नरमा उर्जित पटेल नियुक्त भएका छन् । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले पटेललाई नयाँ गभर्नरका रुपमा नियुक्त गरेको हो । ‘रकस्टार गभर्नर’ रघुराम राजनलाई विस्थापित गर्दै आगामी सेप्टेम्बर ४ पछि पटेलले २४ …
बैंक आफ काठमाण्डू लुम्बिनीका सिईओ अजय श्रेष्ठ नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (एनबीआई) को अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका छन् । एनबीआई कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैंठकले लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत श्रेष्ठलाई संस्थाको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । त्यस्तै सञ्चालक समितिको बैठकले रिक्त …
एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा तिर्थरत्न कोनाजो नियुक्त भएका छन् । कोनाजोले उक्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय पोखरा २९, हेम्जा कास्कीमा आयोजित एक स्वागत कार्यक्रमकाबीच बुधवार पदभार ग्रहण गरे । वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले उनलाई आगामीदुई …
लगानी बोर्डको सदस्यमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा नियुक्त भएका छन् । हालै बसेको लगानी बोर्डको बैठकको निर्णयअनुसार उनी बोर्डको सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् । उनी व्यवसायिक रुपले उद्योगपति भएपनि पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण र समष्ठिगत अर्थतन्त्रका बारेमा …
हाम्रो विकास बैंकका सीईओ कपिल ढकालले राजीनामा दिएका छन् । बैंक सञ्चालम समितिको सोमबार बसेको बैठकले आगामी साउन ७ गतदेखि लागू हुने गरी सीईओ ढकालको राजीनामा स्विकृत गरेको बताइएको छ । सोही बैठकले पारसराज कँडेललाई नयाँ सीईओमा नियुक्त समेत गरेको …
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले महाप्रवन्धकद्वय विष्णु प्रसाद वैद्य र भुपेन्द्र पाण्डेलाई का.मु. नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ । बैंकको संचालक समितिले सो निर्णय गरेका हुन् । वैद्य र पाण्डेले गत बुधबारदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । …
कम्पनीमा नियुक्त हुँदा दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदसँग व्यवस्थापन समितिले करार भङ्ग गरेको छ । सञ्चालक समितिको यही असार १७ गतेको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदसँगको करार सम्झौता समाप्त गर्ने निर्णय …
फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सको निर्देशकमा उमेश कटुवाल
फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैङ्क लिमिटेडको निर्देशकमा उमेश कुमार कटुवाल नियुक्त भएका छन् । बैङ्कको आइतबार (असार १९ गते) सम्पन्न भएको सञ्चालक समितीको बैठकले सो निर्णय गरेको बताइएको छ । फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्था हो …
एसबीआई बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा आचार्य
नेपाल एसबीआई बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक कृष्ण प्रसाद आचार्य चयन भएका छन् । सोमबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकले आचार्यलाई अध्यक्ष चयन गरेको हो । यस अघि बैंकको अध्यक्ष रहेकी हसनादेवी शर्मा कोषबाट सेवा …
लुम्बिनी बैंकका सीईओले किन छोडे बैंक ?
लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले बैंक छोडेका छन् । उनले आइतबार साँझ आफ्ना कर्मचारीहरुलाई ईमेल लेख्दै बैंक छाडेको जानकारी दिए । लुम्बिनीसँगको १० बर्षे यात्राबाट सोमबारदेखि अलग भएको ईमेलमा लेखेका छन् । लुम्बिनीमा कार्यकाल बाँकी छँदै सञ्चालक समितिलाई …
सिद्धार्थ बैंकको सीईओमा पुनः भण्डारी
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र भण्डारीको एक कार्यकाल थपिएको छ । बैंक सञ्चालक समितिले एक कार्यकाल पुरा गरिसकेका भण्डारीलाई नै अर्को कार्यकाल दिने निर्णय गरेको हो । उनी अबको एक कार्यकाल अर्थात् ४ वर्षसम्म सिद्धार्थ बैंकमा नै …